म्याकमा हार्ड डिस्कको सामग्री कसरी प्रदर्शन गर्ने ग्याजेट समाचार
अलि अलि गर्दै, आंशिक रूपमा म आईफोन र आईप्याड दुबैको प्रयोगकर्ता हुँ भन्ने तथ्यको कारणले म म्याकमा झण्डै "बाध्यतापूर्वक" स्विच गर्न बाध्य भएको छ, आंशिक रूपमा योसेमाइटले आईफोन मोबाइल उपकरणहरूसँग एकीकरणको सर्तमा थप गरेको सुधारको कारण। र आईप्याड योसेमाइटको साथ, म्याक अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा नयाँ संस्करण, तपाईं हाम्रो आईडीभिस को धेरै प्रकार्यहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ सिधा हाम्रो म्याकबाट, कसरी कलहरू गर्ने र प्राप्त गर्ने, एसएमएसको उत्तर दिन, म्याकको साथ हाम्रो आईफोनको इन्टरनेट जडान साझेदारी गर्नुहोस् ...
ओएस एक्सको बारेमा हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्न सक्ने एउटा कुरा यो हो कि हामी हाम्रो कम्प्युटरको सामग्री सीधा पहुँच गर्न सक्दैनौं, सजीलोसँग हामी यसलाई आफ्नो विन्डोज कम्प्युटरबाट पहुँच गर्न सक्छौं। म्याकबाट, हामी तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू प्रयोग बिना नै गर्न सक्दछौं तर हामीले थोरै खन्नु पर्दछ। हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा भण्डार गरेका जानकारीहरूमा पहुँचका साथ, हामी खोजकर्ताको मनपर्ने खण्डमा फोल्डरहरू थप्न सक्दछौं, विन्डोज जस्तै अधिक सहज तरीकामा पहुँच गर्न।
हाम्रो म्याकमा स्थापित फोल्डरहरू देखाउनुहोस्
सबै भन्दा पहिले हामी मा जानु पर्छ अन्वेषक.
फाइन्डर भित्र, हामी माथिल्लो मेनू बारमा खोजीकर्ता> मा जान्छौं प्राथमिकताहरू.
प्राथमिकता भित्र, हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्: सामान्य, फाइन्डर, साइडबार र उन्नत। हामी पूर्वनिर्धारित रूपमा देखा पर्ने ट्याबमा बस्नेछौं सामान्य.
सामान्य भित्र, हेडिंग अन्तर्गत डेस्कटपमा यी वस्तुहरू देखाउनुहोस्, हामीले चयन गर्नुपर्नेछ पहिलो विकल्प हार्ड ड्राइभको हेडिंग अन्तर्गत.
डेस्कटपमा केवल यसलाई थिच्नुहोस् हाम्रो हार्ड ड्राइव को आइकन प्रदर्शित हुनेछ। यदि हामी यसमा क्लिक गर्छौं भने, हामीले स्थापना गरेका फोल्डरहरू देखा पर्नेछन् र हामी तिनीहरू माझ नेभिगेट गर्न सक्दछौं।
यदि हामी यी कुनै पनि फोल्डरहरूलाई हाम्रो म्याकको मनपर्ने खण्डमा थप्न चाहान्छौं, हामीले यसलाई केवल त्यस खण्डमा ड्र्याग गर्नुपर्दछ, ताकि हामी गर्न सक्दछौं। चाँडै यसको सामग्री पहुँच गर्नुहोस्, बिना विभिन्न मेनूहरूमा नेभिगेट गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » म्याकमा हार्ड ड्राइभ सामग्री कसरी प्रदर्शन गर्ने
धन्यबाद म म्याकिन्टस एचडी पहुँच गर्नका लागि खोज्दै थिएँ र मैले यो राम्रो पाठ पाए।
विन्डोज .8.1.१ मा खाताबाट पुराना तस्वीरहरू कसरी मेटाउने